Fiara tsy mataho-dalana nandalo teny amin’iny faritra 67 ha Avaratra Andrefana iny no nokasainy hanaovana ny asa ratsiny, ka mody mamo mitsirara amin’ny arabe izy, mijanona ny fiara mahita izany, ary miarina tampoka izy mamoha ny varavaran’ny fiara ka maka izay sendra ny tanany.
Taitra noho ny fihetsiny ny mpamily ka mamelona ny fiara miezaka mitsoaka. Ao anatin’io savorovoro io no milaza izy fa nodomin’ilay fiara ary miantso olona hitroatra. Efa misy namany eny amin’ny sisiny mampirisika. Tonga ara-potoana ny polisy ary nentina teny amin’ny Kaomisaria izy sy ny mpamily. Vao avy nanendaka finday ana mpamily taksi tao Ankasina koa izy izay tratra teny aminy. Niaiky ny asa ratsiny izy ary misy manampy azy amin’izany izay karohin’ny polisy.
Rah any vaovao re farany omaly alina dia tsy tonga niatrika ny fitsarana ireo olona tokony nitory koa dia naverina eny amin’ny polisy indray aloha ilay jiolahy.Asa izay ho tohiny.